Col. Qadaafi oo lagu arkay Zimbabwe & wararkii u dambeeyey Liibiya+Sawiro – SBC
Col. Qadaafi oo lagu arkay Zimbabwe & wararkii u dambeeyey Liibiya+Sawiro
Wararka ka imaanaya wadanka Liibiya ayaa sheegaya in hogaamiyihii wadankaasi 42 sano xukumayey Col. Muamar Al-Qadaafi uu u baxsadey wadanka Zimbabwe isagoo ay la socdaan haweenka ilaalada u ah ee boqolaalka gaaraya.
Col. Qadaafi ayaa wararku sheegayaan in ay dalka Liibiya si qarsoodi ah uga qaaday diyaarad ciidan oo uu u soo diray madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe, waxaana jirar warar ka soo baxaya magaalada Harare ee caasimada Zambia oo sheegaya in sirdoonka madaxweyne Robert Mugabe ay sheegeen in ay arkeen Col. Qadaafi.
Col. Qadaafi ayaa la sheegay in diyaaradu geysey magaalada Harare maalinimadii Arbacad aroor hore.
Website ay leeyihiin koox saxafiyiin ah oo u dhalatey wadanka Zimbabwe oo lagu magacaabo Zimbabwe Watch ayaa qorey in masuuliyiin ka tirsan xisbsiga mucaaradka Zimbabawe ee he Movement for Democratic Change ay sheegeen in Col. Qadaafi uu ku sugan yahay magaalada Harare oo uu magangalyo siinayo madaxweyne Mugambe.
Haweenka ilaalada ah ee uu caanka ku ahaa Col. Qadaafi ayaa la sheegay in lagu arkay iyagoo ilaalo xoogan ka haya deegaanka Gunninghill ee magaalada Harare halkaasi oo la aamisan yahay in Col. Qadaafi uu ku sugan yahay.
Qadaafi ayaa wararku xusayaan in uu ka soo baxay saldhig ciidan oo ku yaal magaalada Sirta ah ee uu ku dhashay halkaasi oo horey duqeymo ugu geysteen diyaaradaha dagaalka ee NATO.
Qadaafi oo ku dhuumanaya dhufeysyo ku yaal magaalada Sirta.
Inkastoo ay soo baxayaan wararka sheegaya in Col. Qadaafi uu u baxsadey magaalada Harare hadana waxaa si weyn uga dhex guuxaysa in Col. Qadaafi uu ku sugan yahay gudaha wadanka Liibiya isla markaana uu ku sugan yahay magaalada uu ku dhashay ee Sirta, halkaasi oo ay ku sugan yihiin boqolaal ciidamo daacad u ah oo daafacaya.
Wararku waxay sheegayaan in uu dhuumanayso Qadaafi dhufeys dhulka hoostiisa laga qoday, iyadoo ay ku doodayaan xoogaga mucaaradka in ay gali doonaan Sirta ayna gacanta ku soo dhigi doonaan Col. Qadaafi.
Sirta waxay u jirtaa magaalada Tripoli 300 oo mile waxaana halkaasi duqeymo xoogan ka geystey diyaaradaha dagaalka NATO kuwaasi oo duqeeyey saldhigyada ciidan ee xoogaga daacada u ah Col. Qadaafi si loo wiiqo awoodiisa dhanka ciidamada.
Abaalmarin cidii Qadaafi soo hesha ama disha.
Xoogaga falaagada Liibiya ee la dagaalamaya Col. Qadaafi ayaa sheegay in ay siin doonaan cidii soo sheegta halka uu ku sugan yahay Qadaafi ama disha aduun lacageed oo gaaraya 1.7 milyan (Milyan & todobo boqol oo kun doolar) taasi oo ah abaalmarin.
Hogaamiyayaasha golaha qaranka Liibiya oo dunida codsi u jeeidyey.
Golaha qaranka KMG Liibiya waxay ka codsadeen aduunka gaar ahaan dawladaha xanibay dhaqaalihii ama lacagtii Col. Qadaafi inay u soo fasaxaan, iyagoo sheegay in lacagtaasi ay si deg deg ah ugu baahan yihiin oo ay doonayaan inay ugu qabtaan shacabka Liibiya oo mudo lix bilood ah dagaal ku jiray, isla markaana hawlaha ama adeegyada bulshada lagu fulin doono.
Laakiin ururka midowga Afrika oo wali diidan in uu u aqoonsado golaha qaranka KMG Liibiya dawlada wadankaasi matasha ayaa sheegaya inaanay xaq u laheyn in la siiyo dhaqaale & aqoonsi xoogaga la dagaalamaya Col. Qadaafi oo ay u arkaan in yihiin falaago.
Dagaalka Liibiya oo laga cabsi in uu ku faafo gobolka.
Waxaa jirta cabsi xoogan oo ku aadan in dagaalka ka socda Liibiya uu ku faafo wadamada dariska sida Mali, Niger, Chad & Mauritania kuwaasi oo wadnaha farta ku haya in ay u soo talaabaan rabshada.
Al-Qaacida oo laga baqayo inay ka faa’ideyso fawdada Liibiya.
Dawlada Al-Jeeriya oo la aaminsan yahay inay magangalyo qarsoodi ah siisay gabar uu dhalay Col. Qadaafi & xaaskiisa ayaa sheegtey inay ka walaacsan tahay in hubka gacanta u galey dadka rayidka ah & fawdada Liibiya ka taagan ay si fudud uga faa’ideysato kooxda Al-qaacida gaar ahaan garabka waqooyiga Afrika.
Tripoli oo qaran laga soo sheegayso
Magaalada Tripoli oo ay ka dhaceen maalmihii la soo dhaafay dagaalo lagu riiqmay ayaa waxaa laga soo sheegayaa xaalado argagax leh, iyadoo la helay 150 oo shacab Liibiyaan ah oo meyd ah, kuwaasi oo la sheegay inay xasuuqeen ciidamada Col. Qadaafi.
Saxafiyiinta ku sugan Tripoli ayaa soo sheegaya in 53 qof meydadkooda ay tiro koobeen, kuwaasi oo la gubay qaarkood, waxaana la sheegaya in dadkaasi lagu xasuuqay agagaaraha saldhiga military ee Khamiis waxaana la aamisan yahay in dadkan la xasuuqay maalmihii Talaadada & Arbcada.
Sidoo kale waxaa laga helay goob kale meydka laba askari oo gacmaha ka xir xiran oo la toogtey, kuwaasi oo mucaaradku sheegayaa inay diideen amaro ay siiyeen saraakiisha Col. Qadaafi daacada u ah, balse ma jiraan warar madaxbanaan oo sheegashadan xaqiijinaya.
Video dagaalada Liibiya meydad laga helay Isbitaal.